Iimpawu, ukondla kunye nokuzala kwakhona kwe-octopus eluhlaza okwesibhakabhaka | Ngeentlanzi
IsiJamani sasePortillo | | Izilwanyana ezingenamqolo
Namhlanje siza kuthetha ngolunye lweentlobo zezilwanyana ezibonakala ngokungafaniyo kwaye zihlala ezilwandle nasezilwandle. Malunga nayo octopus eluhlaza okwesibhakabhaka. Iyaziwa ngokuba yi-octopus enezinto eziluhlaza okwesibhakabhaka kwaye inembonakalo ekhethekileyo kuba iyakwazi ukutshintsha imibala ukuze idibane nokusingqongileyo ngokungathi yinyamakazi. Yindlela yokudibanisa kunye nokusingqongileyo kunye nokuqinisekisa ukusinda ngale ndlela yokufihla.
Kule nqaku siza kukuxelela zonke iimfihlelo ze-octopus eluhlaza okwesibhakabhaka.
3 Indawo yokuhlala kunye nokutya
4 Ukuzaliswa kwakhona kwe-octopus eluhlaza okwesibhakabhaka
Ezi octopus zihlala kwizithintelo zekorale apho zinokufihlwa ngokugqibeleleyo ngokuguqula umbala wazo ukuze udibane nendalo. Ezi octopus zinombala otyheli, nangona kwindawo abahlala kuyo banokuba mnyama okanye khrimu ngombala. Kulula kubo ukudibanisa kakuhle nokusingqongileyo, kuba umbala oluhlaza okwesibhakabhaka ubavumela ukuba bazifihle. Kulula ukuqonda ukuba loluphi olu hlobo lwe-octopus ngombala wayo.
Umzimba we-octopus unamakhonkco aluhlaza kunye neenkcukacha ezizodwa. Incinci kakhulu kwaye inobude ngokubanzi bee-intshi ezi-8. Enkosi kwi-anatomy abanayo, banamandla amaninzi kwaye banamandla kwaye bayoyika. Umzimba wayo ubhetyebhetye ngenxa yokuba ayinalo naluphi na uhlobo lwamathambo. Enkosi ngaloo nto, banokuhamba emanzini ngesantya esiphezulu kwaye ngobuchule obukhulu.
Ubungakanani akufuneki bukubhidanise kuba iyakwazi ukwandisa iingalo zayo ngokubanzi xa izama ukubamba ixhoba layo okanye ukuzikhusela xa ijamelene nengozi. Endaweni yokukhasa njengezinye iintlobo ze-octopus, ezi ntlobo zihlala zibonwa zidada. Balala ngecala lokuqubha, nto leyo ibenza ukuba kubelula ukunyathela phantsi kwamanzi. Nangona inomzimba omncinci, iyakwazi ukugcina izixa ezikhulu zetyhefu ngaphakathi.
Ityhefu kucingelwa ukuba sisiphumo sendaleko yayo. Ngaphambi kokuba i-octopus eluhlaza okwesibhakabhaka ingenayo ityhefu ngaphakathi. Oososayensi bacinga ukuba obu buthi buncede babaguqula baba luhlobo olomeleleyo ngokuhamba kwexesha elinakho ukuzikhusela nokubamba ixhoba labo ngokulula. Kwezi ntlobo zezidalwa, indaleko inokuphazamisa.
Ezi octopus zibonisiwe ukuba zinenqanaba eliphezulu lobukrelekrele kwaye zinokuziqhelanisa ngokulula nemeko yazo. Ndiyabulela kobu buchule kunye nobukrelekrele, iyakwazi ukuhlala kwindawo eziqinileyo kwaye iqinisekise impumelelo yayo yokuzala. Ingxowa ye-inki enayo ngaphakathi nayo kucingelwa ukuba iyinxalenye yokuzivelela kwayo kwiminyaka edlulileyo. I-octopus eluhlaza okwesibhakabhaka inokuba ikhe yaziphucula ezi mpawu ukuhlawulela ubungakanani bayo obuncinci. I-inki ibanceda benze indlela yokubaleka kumarhamncwa ukuze baphile.
Ngaphandle kwembonakalo yayo encinci, ithathwa njengenye yezona ntlobo zinoburhalarhume emhlabeni. Akuqhelekanga ukuba bakwazi ukuzimela njengezinye iintlobo ze-octopus. Ukuba baziva besoyikiswa, bayakwazi ukuhlasela ukuzikhusela kunokuba bayeke i-inki kwaye babaleke. Kufuneka kuqatshelwe ukuba banendawo kwaye balwa kanzima ukukhusela indawo yabo. Xa benokutya okanye ikhusi, balwa kanzima ukuze bakugcine, ngoko ke kuyingozi ukuhamba ujikeleza kwi-octopus eluhlaza okwesibhakabhaka. Ngelixa ezinye iintlobo zingakhange zijongane, i-octopus eluhlaza okwesibhakabhaka ayizukuhlala kwangoko ukuba ihlasele.
Xa ikhupha ityhefu iyingozi kakhulu. Kubantu, ukulunywa kwale ngwane kuyabulala. Sesinye sezizathu eziphambili zokuba abantu bakuphephe ukungena emanzini apho bahlala khona. Bayayoyika ukulunywa kunye nenaliti yetyhefu.
Indawo yokuhlala kunye nokutya
Ngokungafaniyo nezinye ii-octopus, i-octopus ene-blue-ringed ayihanjiswa ngokubanzi. Eminye imimandla iyaziwa apho bahlala khona, umzekelo, ngakumbi kwiindawo zePasifiki kunye namanye amaqela amakhulu ajikeleze iJapan ne-Australia. Kunzima ukuzama ukwazi eyona ndawo kanye ezi zilwanyana zihlala kuyo, kuba bahamba bekhangela amakhaya amatsha kunye nezizathu zokhuseleko.
Nangona sele sichazile ukuba sisilwanyana esinoburhalarhume, kuba sinokubandakanyeka kwiingozi ezigqithileyo kuso, bahlala beyiphepha imilo ngokufuduka kwiindawo rhoqo.
Ngokumalunga nokutya kwabo, banokutya okwahlukeneyo. Bahlala bezingela ebusuku kwaye basebenzise umbono wabo ogqwesileyo ukufumana ukutya ngaphandle kwengxaki. Bayakwazi ukutya ii-shrimp, iintlanzi, kunye noononkala. Ezi zilwanyana ziphumelele ekuzingeleni ngenxa yesantya esiphezulu esinazo ekuhambeni kwazo kunye netyhefu abayisebenzisayo ukubeka emzimbeni wexhoba ngexesha elifutshane.
Ubuhlungu buyalikhubaza ngokupheleleyo ixhoba kwaye kunika i-octopus lula ukukwazi ukungena kwiigobolondo usebenzisa umlomo wayo. Le yindlela abakudla ngayo ukutya ngaphakathi kwegobolondo. Kuyenzeka ukuba uqaphele ezinye zeendlela zokuziphatha kwabantu, nangona zingenanto yakwenza nokunqongophala kokutya. Badla omnye komnye ngenxa yeengxabano zomhlaba.
Ukuzaliswa kwakhona kwe-octopus eluhlaza okwesibhakabhaka
Ezi zilwanyana zihlala zodwa ngenxa yobundlobongela ezibonakalisayo. Bahlala betshintsha indlela abaziphethe ngayo xa sele bekulungele ukutshata kwaye bangabi ndlongondlongo. Zombini iinkunzi neemazi zihlala kwindawo enye kangangeentsuku ezimbalwa ngelixa ukumitha kwenzeka. Zama ukwenza ukuba kwenzeke amaxesha amaninzi kangangoko kunokwenzeka.
Iinkunzi ziyakonwabela ukukhwelana, ke abantu basetyhini bayanyanzelwa ukuba babahlule kwaye bemke kubo ngeentsuku ezilandelayo. Amadoda aya kuzama ukugcina ukukhwelana kwaye ukuba abayifumani into abayifunayo, ngokuqinisekileyo iyakuphela kukulwa. Kwiklatshi nganye, imazi ibeka malunga namaqanda angama-50.
Amadoda nabasetyhini bahlala ixesha elifutshane. Iinkunzi zihlala zifa emva kokumitha. Iimazi zifa emva kokuba amaqanda eqandusele. Njengesiqhelo, Umndilili wokuphila kwe-octopus nganye uphakathi kwe-1 kunye ne-1 kunye nesiqingatha seminyaka.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi nge-octopus eluhlaza okwesibhakabhaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izilwanyana ezingenamqolo » I-octopus eluhlaza okwesibhakabhaka